Mankalaza ny faha-40 taonan'ny fanatrehan'i Apple any Singapore i Tim Cook | Avy amin'ny mac aho
Manuel Alonso | 23/07/2021 14:00 | About us
Tamin'ny taona 1981 dia nanapa-kevitra i Apple fa i Singapore no toerana mety hanombohana ny asa any Azia. Voalaza sy vita ary amin'izao fotoana izao 40 taona no lasa hatramin'ny nanombohany. Singapore dia toerana iorenan'ny Apple amin'ny asany Asia-Pasifika. Androany, nilaza i Apple fa mampiasa olona maherin'ny 3500 izy ary manohana asa 55,000 ao an-tanàna miaraka amin'ny toekarena fampiharana iOS. Nankalaza ny fotoana i Tim Cook tamin'ny a resadresaka vaovao amin'ny radio eo an-toerana, izay hiresahany ny zavatra niainany voalohany tamin'ny Mac.
Rehefa afaka 40 taona Apple dia mavesatra toy ny tany Asia hatrany, noho ny fisian'izany ao an-tanànan'i Singapore. Taorian'izay 40 taona izay, ny CEO CEO Apple Tim Cook dia nifandray tamin'ny onjampeo an-toerana Mediacorp Class 95. Nofaritan'i Cook ny fomba iray amin'ny asany voalohany nanatevin-daharana an'i Apple tamin'ny taona 1998 dia ny fitsidihana an'i Singapore hanamarinana ny tsipika famokarana iMac.
Tao anatin'io tafatafa io ihany dia nilaza i Cook fa ny vokatra Apple voalohany dia ny Apple II, izay nampiasainy ho ampahany amin'ny tetik'asa zokiny indrindra ao amin'ny Oniversite Auburn. Ankoatry ny famokarana, Apple dia mampiasa vola ihany koa amin'ny indostrian'ny fampiharana Singapura. Nanangana programa an'ny fanafainganana manampy ny mpianatra hianatra Swift anisan'ny fandaharam-pianarana ao an-tsekoly.
Nanomboka teo dia nanome baiko ny governemanta Singapaoro fa tsy tokony hianatra hanao kaody mandritra ny 10 ora farafahakeliny ireo mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany. Nanamarika i Apple fa ny Butter Royale, iray amin'ireo lalao Apple Arcade malaza indrindra, dia novokarin'ny ekipa iray avy ao amin'ny tanàna aziatika. Nefa tsy maintsy milaza ihany koa isika fa ny iray amin'ireo magazay fivarotana manaitra indrindra an'i Apple dia ao an-tanàna ihany koa. Io no hita amin'ny sary fanokafana an'ity lahatsoratra ity. Apple Marina Bay Sands nosokafana ny septambra lasa teo ary mitsingevana ara-bakiteny eo ambonin'ny rano.
Mitohy ireo tetik'asa satria azontsika antoka fa maniry efa-polo taona hafa ny orinasa, farafaharatsiny. Amin'izao fotoana izao dia miara-miasa amin'ny governemanta izy amin'ny tetik'asa angovo azo havaozina. Niara-niasa tamin'ny orinasa angovo amerikana Sunseap ny Amerikanina hametraka panneaux solaire amin'ny tranobe maherin'ny 800, namokatra herinaratra 32 megawatt ary nanampy tamin'ny fampandehanana ny fivarotana antsinjarany an'i Apple. Angovo azo havaozina 100%.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mankalaza ny 40 taona nijoroan'ny Apple any Singapore i Tim Cook